အီးမေးလ်ပို့ရန် & apps များ apk အပေါ်ရရှိနိုင်ပါက SMS Apps ကပဟာ android apk
ပင်မစာမျက်နှာ » အီးမေးလ် & SMS ကို Apps ကပ
Category: - အီးမေးလ် & SMS ကို Apps ကပ
အီးမေးလ် & SMS အက်ပ်များ
ကျနော်တို့မကြာခဏရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသလိုခေါ်ဆိုထက်ပိုမိုဘို့ငါတို့ဖုန်းများအပေါ်အားကိုး။ သို့သော်ဤအေးမြ gadgets နေဆဲ၎င်းတို့၏အခြေခံ feature များထက် ပို. မယ့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။
ချစ်ရသူနှင့်အတူစာပို့ရန်သင့် client များသို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းကနေသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုသင်သွားလေရာရာ၌ကမ္ဘာကြီးကိုချိတ်ဆက်နေဖို့အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ သို့သော်သင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာ Pre-installed သောက default apps များအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာမည်မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့သူတို့ကကျိန်းသေသင့်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Google က Gmail app ကို
Google က Gmail app ကိုမဆို Android device ကိုအပေါ်ကို default အီးမေးလ်က App ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင် Windows အတွက်ဂျီမေးလ်အပေါ်အားကိုးအထူးသဖြင့်အခါ, အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေများနှင့်အစွမ်းထက်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်၏ desktop site ကိုများကဲ့သို့အခြေခံစာပုံး setup ကိုရှိပြီးပါကအီးမေးလ်များအားလုံးကိုအမျိုးအစားရှိပါတယ်။ သင်ပထမဦးဆုံးမြင်ချင်အီးမေးလ်များအမျိုးအစားများကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျလိုအပျနအနည်းဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူမေးလ်အလုပ်များကိုအများဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစတစ်မိနစ်ကြာမှေးမည်သည့်စနစ်နှင့်အတူကြွလာ။
ဒါဟာသူတို့မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Exchange, Google သို့မဟုတ်မည်သည့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် server ကို webmail ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအတွက်လုပ်ကြသည်ဖြစ်စေ, အတော်ကြာအီးမေးလ်အကောင့်သို့မဟုတ်အကောင့်မဆိုအမျိုးအစားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ Desktop ပေါ်မှာ Outlook နဲ့အပေါ်အားကိုးလိုလျှင်, Microsoft Outlook အန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံးအီးမေးလ်က App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံလုံးဝခြုံငုံမိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဂေဟစနစ်သို့သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Outlook ကို အသုံးပြု. များမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, Android အတွက် Outlook နဲ့ကျိန်းသေသင့်ဖုန်းမှအမှုအရာပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ Microsoft ကအားဖြင့်အာရုံစူးစိုက် inbox ရဲ့ configuration နဲ့အတူအလွန်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကိုရှိပါတယ်။ ဒီ app ထဲမှာ, အီးမေးလ်များကိုမူလတန်း tab ကို (သူတို့ကသင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုမလိုအပ်လျှင်) သို့မဟုတ် "အခြား" tab ကို (သူတို့အရေးမပါဖြစ်ဟန်လျှင်) သို့ခွဲခြားပေးသည်။ ရုံ desktop ကိုဗားရှင်းလိုပဲ Android အတွက် Outlook နဲ့သင့်ရဲ့အကောင့်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြက္ခဒိန်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ ဒါဟာဖြစ်စေရုံသင်၏ Microsoft အကောင့်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအစမဆိုကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် server ကို webmail ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံမှအခြားအအီးမေးလ်အကောင့်ကိုထောကျပံ့နိုငျသညျ။
Android အတွက် SMS ကို Apps ကပနှင့်သင်၏ default အ messaging app မြောင်း
Messaging ကိုအခြေခံအားဖြင့်သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်လုပ်ဖို့အသုံးအများဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များကဲ့သို့ပင်သင်တို့သည်လည်းမက်ဆေ့ခ်ျပို့များအတွက်အကောင်းဆုံး apps များအသုံးပြုချင်ပေမည်။ ဒါဟာအခြေခံဖုန်းများလကျထကျဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ယူပေးသောဟောင်းနည်းပညာ, သောကွောငျ့သငျသညျအစဉ်အလာတွေကိုတော့ text-messaging app နည်းများအနည်းငယ်ခြားနားချင်ဆိုလိုသည်။ ဒါဟာတစ်နည်းနည်းနဲ့ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်များနှင့်ဖက်စ်စက်တွေနှင့်အတူကပ်ရန်စီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အဆင်ပြေမှကြွလာသည့်အခါသင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်စာရင်းထဲတွင်မည်သူမဆို၏ဖုန်းနံပါတ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာသူတို့ကိုစာပို့နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သင်ရုံအပို features တွေနှင့်အတူသွားနှင့်အခြား၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမနိုင် အီးမေးလ် & SMS အက်ပ်များ မှာ android များအတွက် Apps ကပ APK ကို။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်အလွယ်တကူ Real-time မီဒီယာဖိုင်များ, တည်နေရာနဲ့စာရွက်စာတမ်းများမျှဝေ desktop ပေါ်က apps များနှင့်သင်၏စကားပြောဆိုမှုတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းတတ်နိုင်သမျှကို Wi-Fi ကို အသုံးပြု. ကွန်ယက်မပါဘဲသတင်းစကားကသူတို့ကို။
ဒါဟာအသစ်တခု messaging service ကိုအသုံးပြုရန်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုတောင်းဆိုနေတာနဲ့အောင်နေဖြင့်စိန်ခေါ်ခံရဖို့ပုံရသည်လိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကသင့်ရဲ့အားထုတ်မှုကယ့်ကိုထိုက်တန်သည်။ သစ်ကိုပြောင်းရန်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့် အီးမေးလ် & SMS အက်ပ်များ သင်တို့သည်နောက်တဖန် Android အတွက် default အစာသားကို apps များအသုံးပြုချင်လျှင်။
Microsoft Kaizala - ချက်တင် ...
အီးမေးလ် - ဂျီမေးလ်အတွက်စာ ...
MessageLOUD: မိန့်ခွန်းမှစာသား: ...
SMS ကိုအရှေ့တောင် GO
တဦးတည်းကို SMS, MMS ကို - နယူး ...
iCloud မေးလ်များအတွက် Sync ကို
မေးလ် GO - အဘို့အအီးမေးလ်ပို့ရန် ...
Caller အမည်ကြေညာချက်များ: SMS ကို ...
အီးမေးလ်ပို့ရန် - အီးမေးလ်စာတိုက်ပုံး
မှစ. ခေါ်ရန် & SMS
messaging + ကို SMS, MMS ကိုအခမဲ့
messaging Booster- လျင်မြန်စွာစာပြန်ရန်
ချစ်စရာရုပ်ပြောင် Keyboard ကို iMore ...
တိုက်ရိုက်မေးလ် - အီးမေးလ်ပို့ရန် ...
ကိုးမေးလ် - အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာ ...
မဆိုမေးလ်များအတွက်အီးမေးလ် App ကို
Temp မေးလ် - ယာယီ ...
autoresponder + SMS ကို Scheduler ကို